I-ANC igubha iminyaka eyikhulu: ukubhalwa kabusha komlando
Umfanekiso “wamathambo omile” owenziwa omunye wamabhishobhu emgujweni we ANC wokuqeda iminyaka eyikhulu ngo January8, 2012 eBloemfontein, awukho muhle, noma unenhloso enhle kwezokholo. Amathambo omile aqala ukuba yingqumba ngaphansi kwethafa-indawo exathuka igazi lombango phakathi kongxowankulu nabasebenzi-ngesikhathi iNingizimu Africa iqala ukuba nomnotho wobungxowankulu. Ukumunca inzuzo egazini, emjulukweni kanye nasezinyembezini zabathathelwa umhlaba, ongxowankulu benza ingqumba yamathambo angenampilo ezinkulungwane zabahluphekile nabasebenzayo. Abasebenzi nabantu abahluphekayo babe cabanga ukuthi i-ANC yayizokwenza isimo sibe ngcono. Kodwa i-ANC yaqhubekela phambili nokuphefumulela impilo kubungxowankulu.
IANC ibeke eceleni wonke unyaka ka2012 ukuthi igubhe ukuqeda iminyaka eyikhulu. Kodwa ikwenza lokhu ebuhlungwini boqhekeko olujulile emlandweni wayo weminyaka eyikhulu. Itshele inhlangano yamabonakude iSABC ukuthi ayiqhakambise ukuthi umzabalazo wokulwa nokucindezelwa ngamazwe adla izambane lampondo kanye nendlazana labamhlophe waqalwa yiANC. Babhala umlando kabusha ngenhloso yokuphakamisa izinga lenhlangano osidima sayo sisezingeni eliphansi.
Iqiniso lithi umzabalazo wokulwa nobungxowankulu kanye nokulwa nengcindezelo yamazwe adla izambane lampondo waqala ngaphambi kokuba khona kweANC. Yilokhu yaba khona iANC eminyakeni eyikhulu eyadlula, umzabalazo wabantu awuzange uholwe yiANC noma wenzeke ngenxa yeANC. Yisho nangesikhathi isasekudingisweni ngo1960, nasemizabalazweni emikhulu eyajika izinto - kusukela ekuvukeni kwe sidlakela semizabalazo yabasebenzi eThekwini ngo 1973, kuya ekungeneleleni kwentsha emzabalazweni wase Soweto, kuya ekubunjweni kwe Cosatu, kanye nezibhelu ezenzeka ngo1980-konke kwenzeka ngaphandle kwe ANC. Abantu bazikhulula baphinde baphoqa uHulumeni wobandlululo ukuthi anikeze iANC ilungelo lokubamba iqhaza kwezombusazwe, abantu bayidlondlobalisa becabanga ukuthi izobatakula kwingcindezelo, bayinika isikhundla sokuhola umzabalazo wenkululeko yezwe nokuqedwa kwengcindezelo ngaphansi kombuso weqeqebana labamhlophe kanye nobungxowankulu.
Kodwa manje abantu sebeqalile ukubona ukuthi iANC yinhlangano yabadla izambane likampondo abangagcinanga nje ngokungabhukuqi umbuso wobungxowankulu. I-ANC yayizimisile kakhulu ukubayingxenye yesigaba sobungxowankulu kangangokuba yayizimisele ukwehlisa umoya ngezimfuno “zomuntu-oyedwa-ivoti-elilodwa”. Ecaleni lokuvukela umbuso, uMandela waba wumkhulumeli wabantu abamnyama ukuthi banikezwe izihlalo ezimbalwa bese ezinye kukhulunywe ngazo ngelinye ilanga. Lokhu kwabonakala njengokuthi ezinye izihlalo bayozithola uma sebekhombisile ukuthi bona bangabantu abamnyama abafanelwe yizikhundla ngoba bathembekile futhi babezosebenzisa ilungelo lokuvota ukuthi balungise zonke ezinye izinto ngaphandle kokuthatha umnotho ezandleni zongxowankulu.
Okushiwo abahlaziyi bezepolitiki kaninginingi, yizinkantolo kanye nezinhlangano eziphikisayo wukuthi iNingizimu Afrika yaqoka ukuhambisa ngomthetho-sisekelo kunentando yeningi yePhalamende, okuyisikhumbuzo kwiANC ngalokho abavumelana ngakho kwiCodesa – ukunciphisa ukubaluleka kokuvota. Bavumelana ngokuvikela umnotho ukuba uqhubeke ubesezandleni zobungxowankulu, ngalokhu baqinisekisa ukuthi ivoti labantu ngeke likwazi ukushintsha inhlangano yokuxhashazwa. Umthetho wempahla, ongeke ushintshwe nayiningi lamavoti uqinisekisa ukuthi umnotho uhlale usezandleni zesigaba esibusayo, ngakhoke lokhu kugqugquzela intando yendlazana yongxowankulu ukuthi baqhubeke nokuphatha umnotho.
I-ANC yakhiwa futhi imele izifiso zamaAfrika angcono – amakhosi, abefundisi, nabanye abafundile kanye nendlazana lamaAfrica anomhlaba ayemelelekile ngesikhathi kwenziwa ingqungquthela yokwakhiwa kweANC. Ayizange ihambisane nemizabalazo yabasebenzi, ababelwa nobungxowankulu kanye nalabo ababehambisana nobudlelandawonye.
Kwakungelona iphutha ukuthi iANC ayizange yemukele ukwakhiwa kwe-Industrial and Commercial Worker’s Union (ICU) eyadlondlobala ngo1919, ilwa namandla omnotho wabamhlophe. Ngesikhathi beyiphika bathi iyinhlangano yoquqaba “eyabulala ubukhosi base Russia”. Lokhu kwashiwo kuqondiswe kumzabalazo wamaBolshevik ngo1917 – wokuqala futhi okusayiwona wodwa wobudlelandawonye owaphumelela emlandweni – owagqugquzela abasebenzi baseNingizimi Afrika nabanye emhlabeni uphela. Le nzondo yesigaba sabasebenzi iyaqhubeka nanamuhla, yisho noma kukhona umbimbi olukhona ngenxa yokuthi ngaphandle kwalo iANC angabe ayiwuphethe umbuso. Eqinisweni ubuholi obabusekudingisweni bagxeka ukwakhiwa kwezinyunyana ezizimele okuyizona ezakha iCosatu, bathi yizinyunyana “eziphuzi”. Ukwakhiwa kweCosatu kwagcinwa kwamukelwa ngezandla ezimhlophe ngoba ukucwaswa kwalesi sidlakela kwakuyosho ukuzibulala uqobo.
Ngenxa yobumbuka bukaStalin, namuhla ubuholi beANC buzixuba ne South African Communist Party (SACP) okufanele ukuthi yinhlangano yesigaba sabasebenzi, kanye nobuholi obuntekenteke beCosatu. Konke lokhu kwenza ukuthi kube nokucinana kwesigaba sabasebenzi phambi kobuso besilwane sobucebi esihlonishwa yiANC.
Amandla esigaba sabasebenzi – hhayi isigaba esiphakathi seANC
Isigaba sabasebenzi kwakufanele sizabalaze kanzima, siphakame silwe nencindezelo kanye nokuxhashazwa- ngaphandle kwe-ANC. Imizabalazo yanamuhla ezimbonini, emphakathini kanye nabantu abasha kuwubufakazi bokuthi abacindezelwe bayakwazi ukusukuma balwe. Namuhla kuwubumbuka bukaHulumeni we-ANC ukuthi usabise ukuhlula abantu abasebenzayo kanye nabahluphekayo kanjalo nabantu abasha ukuze bangazami nakancane ukuzamazamisa isakhiwo sobungxowankulu.
Kwakungawona umkhonto, kungayona iAK47 ezandleni zamavukela mbuso, kodwa kwakuwubumbano lwamandla esigaba sabasebenzi nabantu abasha abagxisha emqondweni wongxowankulu ukuthi izinto zazingeke zihlale zifana. Unyaka wo1980 wakhombisa lamandla ngokwakhiwa kwe-Cosatu ngonyaka ka1985 okwaba wuphawu olukhombisa ukuvuthwa komzabalazo wesigaba sabasebenzi.
Izihlakaniphi zongxowankulu zabona ukuthi kumele zisebenzise ubuholi ukuvimbela imizabalazo yabantu njengendlela engcono; kwasekungelula ukuncika kwincindezelo kuphela. Busithe, kwasekuqala izingxoxo phakathi kwabamele uHulumeni noMandela ejele noMbeki ekudingisweni. Isivumelwano esenzeka ngenxa yezingxoxo ukuze kubekhona inkululeko engaphelele egxile “kumuntu-oyedwa-ivoti-elilodwa”. Lona umnyombo wombuso wentando yeningi yongxiwankulu ohlulekayo ukuxazulula ubumpofu, ukuswelakala komsebenzi, amazinga aphansi ezemfundo nakwezempilo, ukungabikhona kwezindlu, ukungabikhona kwendlela esezingeni elicokeme lokuthuthwa kwendle, amandla kagesi awenele, amanzi ahlanzekile awekho, nokunye. Akuyona intando yeningi evuna abantu, kepha yintando yeningi yongxowankulu ukuze baqhubeke nokuvuna inzuzo eqhamuka emandleni esigaba sabasebenzi; kuphonswa amathambo amaningi abasebenzi, abantu abahluphekayo kanye nabantu abasha emlilweni wezinkathazo.
Iminyaka engu18… kusaqhubeka “amathambo ome kakhulu”
Okunye egxekwa ngakho eminyakeni engu18 iANC isembusweni, wukuthi iyinhlangano ezimisele ngokupheliswa kokucwasana ngebala eNingizimu Afrika, ihlulekile ukwenzela isigaba sabasebenzi esiyiningi. Umphakathi awuhlukaniseki kalula nezikhathi zobandlululo ezindaweni zokuhlala kanye nezinga lamaholo eliqhubeka nokungashintshi.
Ukucwasa ngokwebala yisikhali esasisetshenziswa wongxowankulu ngesikhathi sombuso wobandlululo ukuze kucindezelwe isigaba sabasebenzi. Ngaphansi kombuso we-ANC abathile kwisigaba esiphakathi nendawo bakwazile ukubalekela lolu cwaso ngokwebala kodwa selubhebhezeleke esigabeni sabasebenzi. Ukunyukela kwe-ANC ekuphathweni kombuso ngo1994 kwakungekhona ukubhukuqa ubungxowankulu kepha babezama ushintsho: umbuso wobungxowankulu wafunda ukusebenza ezimweni ezehlukene ngenxa yemizabalazo enganqobeki yesigaba sabasebenzi.
Ukucwasana ngokwebala yikona okushoyo ukuthi ungubani futhi awusiye ubani. Kwasulwa kuphela emabhukwini, kodwa akususwanga ezimpilweni zabantu base Ningizimi Afrika. Abafazi basahlukunyezwa emzimbeni nasemoyeni kanjalo nokunyukubezwa ngokocansi kusenzeka. Ngeke sikhulume ngempumelelo uma iningi labantu abasebenzayo besasobishini lobumpofu ngayo yonke indlela. YiNingizimu Afrika yobudlelandawonye kuphela engageza zonke izifo zomphakathi. Ngeshwa, kwaba nokweqeka komlando.
Njengoba ubungxowankulu bezwe laseNingizimu Africa bakhelwa esisekelweni somsebenzi oshibhile wabantu abasebenzayo, umzabalazo wobudlelandawonye oholwa abasebenzi kuphela ongaletha ushintsho lwangempela kwezomnotho nakwezenhlalakahle. Lokhu akuzange kwenzeke. Umlando awukwazanga ukuqinisekisa ukuthi abantu abasebenzayo bakhe ubuholi bomzabalazo ongahola isigaba sabasebenzi ukuze sibhukuqe ubungxowankulu.
UbuStalin, busuka ekupheleni komzabalazo waseSoviet ngo1917 nobuthakathaka benhlangano yabasebenzi beMarxist-Bolshevik emhlabeni uphela, badayisa (ubuStalin) isigaba sabasebenzi ngokwakha umbimbi nongxowankulu nabasebenzi. eNingizimu Afrika, ngesikhathi iCommunist Party of South Africa (CPSA) ihlangana neANC ngo 1929 emva komlayelo weThird International, ngenxa yokuthi yithuluzi lokuvikela ongxowankulu emhlabeni wonke, umzabalazo wesigaba sabasebenzi wawuya ekunqotshweni kwawo. Namuhla kuwumsebenzi wombimbi ovikela izidingo zobungxowankulu ngokwenhlangano kanye nangokombusazwe.
Iminyaka eyikhulu yabakhona iANC, kusho iminyaka eyikhulu yokudayisa isigaba sabasebenzi ngosizo eyalithola kwiSACP, okwathi ngo2010 yaqeda iminyaka ewu90 yabakhona, nayo isidima sayo sesadicileka phansi ngenxa yokungabi neqiniso kwisigaba sabasebenzi.
Isisombululo: Ukubhukuqwa kobungxowankulu
Lo mlando ongemuhle kahle weANC usuze wafinyelela eminyakeni eyishumi. Ixakwe wuqhekeko kanye namaqembuqembu ngaphakathi kuyona okukhomba ngokusobala ukuthi ubungxowankulu ngeke bukwazi ukuyisa isizwe phambili. Ubungxowankulu busenkingeni emhlabeni wonke. Mangakanani amathuba eANC ukuthi yenze inqubekela phambili ekwakheni amathuba omsebenzi kanye nezinye izinto ezibalulekile kwezomnotho nenhlalakahle yabantu abasebenzayo nabahluphekile? Awekho.
Isixazululo wukuthi kubhukuqwe umbuso wobungxowankulu bese kubekwe umbuso wentando yeningi yesigaba sabasebenzi – ubudlelandawonye. Lokhu kusho ukuthi kufanele kwakhiwe izinyunyana , izinhlangano zemiphakathi nezabantu abasha ezilwayo, ezilandela uhlelo lobudlelandawonye. Le minyaka eyikhulu yokudayiswa (yiANC) izonyamalala emlandweni – ukuma kwayo eqhulwini lezinkumbulu zabantu kuyokhunjulwa njenge sikhinyabezo esesashiywa ngemuva ngabasebenzi emgwaqeni oya enkululekweni yabo.
I-Democratic Socialist Movement (DSM), eyingxenye ye Committee for a Worker’s International (CWI), ilwela ukuthi kubenobudlelandawonye emhlabeni wonke. Ukuze lokhu kwenzeke, impi yomqondo kufanele ibhekiswe kwi-ANC, kubuholi beCosatu obubuthakathaka kanye ne SACP ehamba ngobuStalin. Ngenxa yomlando isigaba sabasebenzi esiningi sisaqhubeka nokweseka lezi zinhlangano ezivimba inqubekela phambili yemizabalazo.
NgoFebruary 1917, abasebenzi baseRussia baseka izitha zabo ngesikhathi kuzalwa ngokombusazwe amaMensheviks kanye namaSocial Revolutionaries. Kwathatha isikhathi esiya kuOctober ukuze amaBolshevik acacisele abasebenzi nabalimu ukuthi uHulumeni kaKerensky wayenguHulumeni wongxowankulu kanye nabaphathi bomhlaba njengoba namuhla iANC yenza. Noma kuthatha isikhathi eside ukuthi abasebenzi nabantu abasha baseNingizimu Afrika bathole isipiliyoni, ukuqondisisa kanye nogqozi lokulwela ukwakhiwa kukaHulumeni wabasebenzi, isimo somzabalazo singcono kakhulu kunesikhathi sango 1917 eRussia.
Last Updated on Wednesday, 02 May 2012 09:56